Madaxweyne Farmaajo oo khilaafka DF iyo DG ku tilmaamay Dood socota oo ku aadan hannaanka federaalka – Kalfadhi
Madaxweyne Farmaajo oo khilaafka DF iyo DG ku tilmaamay Dood socota oo ku aadan hannaanka federaalka
Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullahi Farmaajo oo maanta ka qayb-galay qalin-jebinta dufcadii koowaad ee ka baxda jaamacadda Ummadda Soomaaliyeed teer iyo markii dib loo furay, ayaa ka hadlay arrimaha federaalka.
Wuxuu sheegay in ay jirto wada-shaqayn ka dhexaysa dowladda federaalka ah iyo dowlad-goboleedyada, wuxuuna khilaafka taagan ee u dhexeeya labada ku dhinac ku tilmaamay dood socota oo ku aadan nooca federaal ee dalku ku shaqaynayo.
“Annagu waxaan niraahnaa federaalka ah saxda ah annagaa ah, maxaa yeelay waxaan rabnaa dowlad dhexe oo xoog leh” ayuu yiri madaxweyne Farmaajo. “Waxaan rabnaa dowlad-dhexe oo leh ciidan dalka difaaci kara, Dowlad-dhexe dhexe oo arrimo dibedeed oo adag leh, waxaan rabnaa dowlad-dhexe oo socdaalka iyo xuduudaha ilaalisa. Waxaan rabnaa dowlad ciidan adag leh oo dhaqaaleheeda iyadu maamusha, dowladda dhexe ee aan rabno waa noocaas” ayuu yiri.
Mudane Farmaajo wuxuu sheegay in wixii ka soo hara hannaanka federaal ee noocaas ah uu yahay federaal fashilan (Los federalism) isla markaasna aysan kaas doonayn.
“Anigana waxaan u arkaa in aan federaalka taageersannahay. Wixii ka soo horjeeda taas waa federaal-diid” ayuu yiri. Madaxweynuhu wuxuu sheegay in dowlad-goboleedyadu ay leeyihiin shaqo waajib ah oo ah in ay adeegyada bixiyaan.
Dowladda federaalka ah ee uu hoggaaminayo mudane Farmaajo ayaa in badan lagu dhaliilayay in aysan ogolayn hirgelinta hannaanka federaalka ah ee dalku qaatay, waxaana teer iyo sannadkii hore khilaaf xooggan u dhexeeyay iyaga dowlad-goboleeyada.
“Dowlad-goboleedyada qaarkood ay nagu dacaayadeeyaan dowladda dhexe oo (Centralist) ah; waa dowlad awoodda rabta in ay qaadato”
Golaha shacabka oo meelmariyay xeerka dhismaha guddiga la dagaalanka musuq-maasuqa